စက်တင်ဘာထာဝရ: ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အင်းလျားလမ်းပေါ်ရှိ အထက (၂) ကမာရွတ်၊ (စိန့်သြဂတ်စ်တင်း) ကျောင်းတွင် လွန်ခဲ့သော မိနစ်ပိုင်းအတွင်းက မီးလောင်မှု တစ်ရပ် ဖြစ်ပွားမှု နောက်ဆုံးအခြေ ဓါတ်ပုံ
မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး အဓမ္မလွှမ်းမိုးမှုမှ အမြန်ဆုံး ကင်းဝေးနိုင်ပါစေသော်ဝ်
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အင်းလျားလမ်းပေါ်ရှိ အထက (၂) ကမာရွတ်၊ (စိန့်သြဂတ်စ်တင်း) ကျောင်းတွင် လွန်ခဲ့သော မိနစ်ပိုင်းအတွင်းက မီးလောင်မှု တစ်ရပ် ဖြစ်ပွားမှု နောက်ဆုံးအခြေ ဓါတ်ပုံ
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ အမှတ်(၂)အခြေခံပညာကျောင်းအတွင်း မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်မှာ ဒီဇင်ဘာလ(၃၀)ရက်နေ့ ညနေ ၅နာရီခွဲ အချိန်ဝန်းကျင်၌ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်ကို အမှတ်(၂)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၌ ညစောင့်တာဝန်အဖြစ်ထမ်းဆောင်နေသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးမှ ညနေ ၅နာရီခွဲအချိန်တွင် စတင်မြင်တွေ့မြင်ခဲ့ကြောင်း ၄င်း၏ ပြောကြားချက်အရ သိရှိရသည်။
မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့သည့် နေရာမှာ တေဇခန်းမဆောင်အနီးရှိ ကွန်ပြူတာ အခန်းမှ စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး တေဇခန်းမဆောင်သို့ ကူးစက်၍ မီးလောင် ကျွမ်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းမီးလောင်မှုကို မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်မှ မည်သည့်နေရာမှ စတင်၍ လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း အတည်မပြုသေးသော်လည်း ယခုလက်ရှိအချိန်ထိ အမှတ်(၂)အခြေခံပညာကျောင်းအတွင်းရှိ တေဇခန်းမဆောင်တစ်ခုလုံး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး အဆိုပါခန်းမအနီးရှိ ကွန်ပြူတာခန်း၊ အိမ်တွင်းမှုအခန်း၊ အနုပညာခန်း၊ ပန်းချီခန်း၊ ကျန်းမာရေးခန်းနှင့် လေးထပ်ဆောင်တို့မှာ မီး ကူးစက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရေးသူ စက်တင်ဘာထာဝရ အချိန် 6:37 AM
အတုမရှိ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား .....
နှစ်သစ်ဆုတောင်းမြန်မာပြည်သူ များနှင့်ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသား အပေါင်းတို့အားနှစ်သစ်မင်္ဂလာမှာ သာယာဝပြောသောတိုင်းပြည်နှင့် ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများဖြစ်ကြ ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်း ရင်းနူတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။ နှစ်သစ်မင်္ဂလာမှာလွန်ခဲ့ပြီးတဲ့ အမှားအမှန်တွေဘေးဖယ်ထားပြီး ရှေ့ဆက်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုပါတယ်။ နိုင်ငံနဲ့သာသနာတွဲသွားနိုင်မှ သားစဉ်မြေးဆက်အတွက် နိုင်ငံနဲ့သာသနာကောင်းမွန်စွာ အမွှေအနှစ်ထားရစ်လိုသူတိုင်း ၂၀၀၇ခုနှစ်ကဆရာဒကာ ညီညွတ်ခဲ့သည့်အတိုင်း စုပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ နှစ်သစ်မှာဆုတောင်းရင်း တိုက်တွန်းနိူးဆော်လိုက်ရပါသည်
ကိုးသချုင်္ီင်းပြန် ပထမံ ဗေဒဆရာသောင်တင် (7)
တိုင်းရင်းသားဒေသများအားထိုးစစ်ဆင်မူနှင့်အကူညီမဲဒုက္ခသည်များ သတင်း (6)
ဓါတ်ပုံ သတင်း (45)
ပါဠိဘာသာဖြင့် ရွတ်ဆိုသောကမ္မ၀ါစာ (1)
မှတ်မှတ်သားသား သူ့စကား (34)
ပြည်သူတစ်ဦး၏ ရင်ဖွင့်စာ (27)
အမှန်တရားကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ (6)
ဝေဖန်းရေး ဆောင်းပါး (13)
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၆)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ဂုဏ်ပြု ဓါတ်ပုံ
Blog Archive February (4) March (5) October (1) April (1) January (2) December (2) November (1) October (1) September (6) August (7) July (7) June (6) May (6) April (6) March (14) February (8) January (7) December (11) August (1) June (1) April (1) February (4) January (70) December (80) November (71) October (63) September (94) August (39) July (81) June (85) May (60) April (60) March (54) February (53) January (57) December (68) November (129) October (98) September (106) August (70) July (35) June (59) May (114) April (116) March (141) February (109) January (155) December (169) November (88) October (81) September (257) August (164)
ဆီးရီးယားရောက် ကုလ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ ပစ်ခတ်ခံရ
Independent news websites accessible in Burma for now
နော်ဝေးနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဘုန်းကျောင်းဖြစ်မြောက်ရေ အစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်း
ကိုပါကြီးအလောင်းတူးဖော်ဖို့ ကျိုက်မရောမှာ ခရီးစတင်
Shwe Nya War Sayadaw
ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်များကို ရွှေည၀ါဆရာတော်က အသိအမှတ်ပြုစကားပြောကြား
ရှေးဟောင်းမြန်မာပြည်ကို ဓါတ်ပုံဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သူ
ရွှေညဝါဆရာတော်၏ မတရားမလုပ်ကြပါနဲ့ တရားနော်။
သာသနာတော်ကို စော်ကားသူ တစ်ယောက်အကြောင်း
စက်တင်ဘာထာဝရဘလော့သို့လာရောက်သူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရွှင် လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။. Powered by Blogger.
ဆက်သွယ်ရန် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ အောင်မြင်ရေး အတွက် ထူးခြားဓာတ်ပုံများ၊ သတင်းများ၊ စာမူများ၊ အကြံပြုစာများ ပေးပို့လိုပါက ashin.htavara@gmail.com သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။
BBC သတင်းနားဆင်ရန် မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်
ညပိုင်းအစီအစဉ် VOA သတင်းနားဆင်ရန် တိုးချဲ့အစီအစဉ် မနက်ခင်း အစီစဉ် ညနေအစီအစဉ် ညပိုင်း အစီအစဉ် VOA Sunday TV DVB Youtube DVB Live TVိDesign by minthukha
Design by: FinalSense | Blogger Templates distributed by Free Templates4U